Gawaarida IETT ee Diyaarka u ah Jiilaal | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGawaarida IETT ee Diyaarka u ah Jiilaal
09 / 12 / 2019 34 Istanbul, IETT, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
aaladaha iett diyaar gaabin
Wadarta 6 gaadiid oo ku xiran IETT ayaa lagu rakibay taayirrada jiilaalka si waafaqsan qawaaniinta. Rusheeyaha ayaa la hubiyey oo ku keydinta waxyaabaha lagu keydiyo biyaha tirtira. Nidaamyada kuleylka ee gawaarida ayaa la badelay. Guuldarooyinka iyo shaabadaha nidaamyada iskuxiran ayaa mid mid lagu hubiyay… Gawaarida IETT waxay hadda diyaar u yihiin qaboobaha.
Bilowga xilliga qaboobaha ee Diseembar, shuruuda taayirrada barafka ee gawaarida ganacsiga ayaa bilaabmay. ETT, Bus Inc. iyo 6 kun 154 baabuur oo ku xiran howlaha basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ayaa loo diyaariyey xilliga qaboobaha. Tallaabooyinka laga qaadayo suurta galnimada barafka waxaa lagu fuliyay isuduwidda degmada Istanbul iyo AKOM. Qalliinka AKOM wuxuu sii wadayaa inuu ka jawaabo 7 maalmood iyo 24 saacadood oo shaqaalaha awoodda loo siiyay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka degdegga ah.
Degmooyinka iyo xaafadaha ay dhibaatadu soo martay sannadihii la soo dhaafay, khadadka, jidadka, jidadka iyo jidadka laga yaabo inuu saameeyo barafka ayaa la go'aamiyay. Qodobbadan halka mudnaanta cusbitaalka loo go'aamiyay, gaarsiinta bacaha cusbo ee aagga ayaa la bilaabay.
CADAALADAHA HOOSE WAA INUU KU YIMID
Marka laga hadlayo digniinta barafka saadaasha hawada, waxaa loo qorsheeyay in la bilaabo wareegtada 03.00 habeenimo iyada oo kuwa ilaaliya barafka si gaar ah loo magacaabay. Kormeerayaashan ayaa kala shaqeyn doona AKOM sidii loo aqoonsan lahaa meelaha looga baahan yahay cusbada degdega ah ka hor intaysan basasku ambabaxin, iyo inay ka fogaadaan inay suuxdo xilli suuro-gal ah.
Sidoo kale waxaa la qaaday tillaabadii 'Metrobus line' oo leh kor u kac iyo hoos si looga hortago waxyeelada xun ee barafka. Macnaha guud, aaladda mashiinka barafka ayaa lagu rakibi doonaa 3 gawaarida gurmadka deg-degga ah. 21 xawaare baraf ah iyo 3 baabuurta xamuulka ah ee ku taal jidka Metrobus waxaa fulin doona Agaasinka dayactirka iyo hagaajinta Wadada ee IMM iyo IETT. Saldhigyada lagu xoojiyo cusbada ayaa lagu aasaasay 44 dhibcood oo ay la socdaan 7-taan ee loo yaqaan 'Metrobus Line'. Si looga hor tago in rakaabku uusan saameyn ku yeelan barafku dariiqa iyo xad-gudubyada dusha sare, ayaa bacaha cusbo loo direy saldhigyada Metrobus si loo isticmaalo markii loo baahdo.
Intaa waxaa u dheer, duulimaadyo dheeri ah waxaa qorsheeyay Xarunta Maamulka Fleet si ay u buuxiso shuruudaha safarka ee xididdada waaweyn ee kor u qaadi kara xaaladaha qaboobaha deg-degga ah.
Dadka Turkiga u Diyaarinayaan Gawaarida Korontada
Xarunta Maareynta Duulista IETT